जानी राखौ, यस्तो बेला महिलालाई शा’रिरीक चाहना बढी हुन्छ ! - कैफियत
तपाइलाई कोहि पाटनर (साथी) को चाहिएको छ ? यसरि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस,
म जस्तै मेरा छोरीले कामको लागि परदेशिनु नपरोस्
‘बेबी बम्प’ देखाएका ८ अभिनेत्री
यसरि थाहा पाउनुहाेस म’हिनावारी रोकिनु अगाडि ग’र्भवती भएको
तथ्य अन्वेषण, सत्य सम्प्रेषण
जानी राखौ, यस्तो बेला महिलालाई शा’रिरीक चाहना बढी हुन्छ !
Posted on २०७८ जेष्ठ २३, आईतवार १४:२८ गते २०७८ जेष्ठ २३, आईतवार १६:०९ गते Author कैफियत	Comment(0)
महिलालाई सारीरीक चाहना बढी हुन्छ १ बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो । जसमा उनिहरूको उत्तर थियो महिनावा’री पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवा’समा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार महिनावारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवा’सले बढी रमाइलो हुने कुरा बताएका थिए । यौ’न विशेषज्ञहरूका अनुसार महिनावा’री पूरा भएको पाँच देखि सात दिनसम्म यौ’नको मु ड बढी हुन्छ । त्यस अनुसार महिना’वारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवा’सले बढी रमाइलो हुने कुरा बताएका थिए ।
यौ’न विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावा’री पूरा भएको पाँच देखि सात दिनसम्म यौ’नको ‘मु ड’ बढी हुन्छ । लिं’गको आकार कत्रो भए महिलालाई शा’री’रिक यौ’न स’म्पर्क गर्दा आ’नन्द मिल्छ ? जानी राखौँ लिं’गको आकार कत्रो हुनुपर्छ रु यौ’न सन्तुष्टिका लागि लिं’गको सही आकार कति हो ?
हाम्रो समाजमा यी यस्ता घटनाहरु प्राय देखिरहेका नै हुन्छौ जहा मोटो मान्छेलाई कति मोटो भन्ने अनि जो दुब्लाृे छ त्यस्तालाई लुरे भनेर जिस्काउने । दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ । विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार विवाह पछि थुप्रै महिला र पुरुषको तौल तेज रुपमा बढ्ने गर्दछ ।
यस्तै एक अन्य अनुसन्धानका अनुसार विवाहको ५ वर्ष भित्र ८२ प्रतिशत जोडीको तौल ५ देखि १० किलो बढ्ने गर्दछ । विशेषज्ञका अनुसार तौल बढ्नुमा हाम्रो परिवर्तित जीवनशैली र बडी चेन्ज नै हो । विवाह पछिको परिवर्तित दैनिकी र जीवनशैलीका कारण शरिरमा थुप्रै हर्मोनल चेन्ज हुने गर्दछ । यो तौल बढाउनका लागि जिम्मेवार हुनसक्छ । यस्तै विवाह पछि व्यस्त समय तालिकाका कारण थुप्रै मानिसहरु पर्याप्त निदाउन पाउँदैनन्
Tagged महिला, शारिरीक चाहना
Posted on २०७८ बैशाख २२, बुधबार १६:५६ गते Author कैफियत
पुरुषले पहिलो पटक महिलालाई हेर्दा कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन् त ? यो कुरा धेरै महिलाहरुको लागि चासोको विषय बनेको हुन सक्छ । जब कुनैपनि युवकको अपरिचित युवतीसँग आँखा जुध्छ । युवकले त्यसपछि नजरले भ्याउन्जेल एकसरो युवतीको सिरदेखि पुच्छार सम्म हेर्छ । पहिलो नजरमा जिउका सबै भागमा आँखा पुराउन सक्ने कुरा भएन । आखिर पुरुषले […]
विहे नगरी ग’र्भवती बन्न चाहाने यी युवतीको इच्छा कसले पुरा गरिदेला
Posted on २०७८ जेष्ठ १३, बिहीबार १६:४८ गते Author कैफियत
पछिल्लो १० बर्षदेखि म बच्चालाई आफ्नो पेटमा हुर्काउन र उसलाई जन्म दिने सपना देखिरहेको छु । तर, म बच्चा सँधैका लागि आफूसँग राख्न चाहान्न, न त म आमा नै बन्न चाहान्छु । यसै कारणले मैले सेरोगेट मदर बन्ने निर्णय लिएँ, जसकारण प्रसुतीपछि मलाई बच्चा मसँगै राख्न नपरोस् । सेरोगेट आमा बन्ने विचार म २१ बर्ष […]
Posted on २०७७ फाल्गुन २७, बिहीबार १३:२४ गते Author कैफियत
बिहे गर्ने सही उमेर कति हो भनेर सोध्ने हो भने मान्छेले आ–आफ्नो अनुभव र सुविधा अनुसार फरक-फरक जवाफ दिन्छन् । छिटो बिहे गरेर पछुताएकाहरुले ढिलो बिहे गर्न सुझाव दिन्छन् भने ढिलो गरेर पछुतो मानेकाहरुले चाँडै बिहे गरेर सन्तान हुर्काइ सक्न अनुरोध गर्छन् तर खासमा बिहे भन्ने कुरा उमेरसँग भन्दा पनि मनसँग सम्बन्धित कुरो रहेछ । […]
दिनमा एक प’टक यौ’न स’म्पर्क नगरी बस्न नसक्ने १८ बर्षिय युवतीको – रोमान्टिक कथा !
विवाह मण्डपमा बेहुलीको मृत्यु, बेहुलाले सालीसंग गरे बिहे